इङ्ल्याण्ड र क्रोएसिया बीच कसले मार्ला बाजी ? केन र मोड्रिकको भिडन्त – Shirish News
इङ्ल्याण्ड र क्रोएसिया बीच कसले मार्ला बाजी ? केन र मोड्रिकको भिडन्त
ह्यारी केन इंग्ल्यान्डका कप्तान हुन्। जारी विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै लयमा रहेका केन लगभग विश्वकप फुटबलको गोल्डेन बुटको विजेता पनि हुन् । केनले जारी विश्वकपमा ६ गोल गरिसकेका छन्।
उनले समूह चरणको दोस्रो खेलमा पानामाविरुद्ध ह्याट्रिक गोल गरेका थिए। जारी विश्वकपमा २ वटा ह्याट्रिक गोल भएको छ, जसमा केनको एउटा ह्याट्रिक र अर्को पोर्चुगलका कप्तान क्रिष्टियानो रोनाल्डोको नाममा छ। सन् २०१५ मा राष्ट्रिय टिममा डेब्यु गरेका केनको यो पहिलो विश्वकप हो। इङल्यान्ड २८ वर्षपछि विश्वकपको सेमिफाइनलसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा ठूलो योगदान कप्तान केनको छ।
यता, क्रोएशियाले समूह चरणमा जस्तो प्रदर्शन नकआउट चरणमा गर्न सकेको छैन। लुका मोड्रिकको कप्तानीमा रहेको क्रोएसियाले समूह चरणमा राम्रो प्रदर्शन गरेको थियो। समूह चरणको पहिलो खेलमा नाइजेरियालाई २-० गोल अन्तरले पराजित गर्दा कप्तान मोड्रिकले पनि एक गोल गरेका थिए।
क्रोएशियाले अर्जेन्टिनालाई ३–० गोलले पराजित गर्दा मोड्रिकले एक गोल गरेका थिए। समूह चरणको अन्तिम खेलमा आइसल्यान्डलाई २-१ गोलले पराजित गर्दा मिडफिल्डर मोड्रिकले गोल गर्न नसके पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। त्यस्तै, उनकै महत्वपूर्ण योगदानमा क्रोएशिया विश्वकपको सेमिफाइनलसम्म आइपुगेको हो । सेमिफाइनल खेलमा पनि यी दुई खेलाडीको प्रदर्शन उत्कृष्ट हुने अनुमान गरिएको छ।-एजेन्सी
रामलखन चौधरी स्मृति कप नवौ प्रदेश स्तरीय खुल्ला नक आउट फुटबल प्रतियोगिता माथि श्री रत्न ज्योति युवा क्लब धनुषाको कब्जा
प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको प्रहरी ऐनको विरुद्ध दलितहरुको जनकपुरमा प्रदर्शन, प्रदेश सभा घेराउ गर्ने क्रममा केहि बेर झडप